Yakavharwa nhabvu timu inodzorwa neApple Watch | Ndinobva mac
Yakavharwa nhabvu timu inodzorwa neApple Watch
Nemamiriro akasarudzika atiri kusangana nawo pasi rese nekuda kwedenda re Covid-19 zvikamu zvese zvehuwandu hwevanhu zvaona maitiro avo ezuva nezuva achichinjwa. Kusungwa kunosungirwa uye kuri kubata munhu wese zvakaenzana.
Zvikoro zvakavharwa, mahofisi asina chinhu, mashopu asina mabasa, uye zviripachena, vatambi zvakare kuvharirwa mudzimba dzavo. Chikwata chenhabvu cheAlabama chakasarudza iyo Apple Watch sechishandiso chekutarisa zvikamu zvekudzidzisa zvinoitwa nevatambi pamba vachiri kukiya. Uye saka director director anotarisa kuti vanoita basa ravo rechikoro nemazvo.
Chinyorwa chemagazini yemitambo Iyo Inodakadza inozivisa kuti timu yehunyanzvi ye Alabama nhabvu yakasarudza Apple Watch kudzora kuti vatambi vayo vanoramba vachiita kudzidziswa kwekuchengetedza mudzimba dzavo nepo kuvharirwa kwekoronavirus kuchiripo.
Zvinotaridza kuti timu yakapa Apple Watch mutambi wega wega asati atanga nguva yekuzvitsaura kuitira kuti vagone kuenderera mberi nekudzidzira mumajimu edzimba dzavo. Nekudaro, iyo kirabhu inogona kuongorora yavo yekurovedza muviri, nguva dzekurara, uye kurova kwemoyo.
Iyo data yeApple Watch yega yega inounganidzwa naJeff Allen, iyo director wezvemitambo kirabhu yemushonga inoshamwaridzana, kuongorora uye kugadzirisa iwo matanho ekudzidzira emumwe mutambi. Nenzira iyi iwe unogona kuziva kubva kune mumwe neumwe wevatambi vako kana vakanyatsotevera tafura yakapihwa yekudzidzira, uye zvinoenderana nedhata raunogashira zuva nezuva kubva kune wega mutambi Apple Watch, inwa idzi nguva dzekudzidzisa dzavanoita mudzimba dzekurovedza dzimba.
Saka zvakakosha kuti uone kuti timu yehunyanzvi yevatambi vanovimba sei Apple Watch. Iye anoishandisa sechishandiso chakakosha mu kuchengetedza kugwinya yevatambi vavo vachiri vakasungirirwa kudzimba dzavo mazuva ano apo denda richiripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakavharwa nhabvu timu inodzorwa neApple Watch
Vamwe vashandisi vane kukuvara kwesystem mushure mekusimudzira kuenda kuMacOS Catalina 10.15.4
Nhabvu maneja 2020, inowanikwa pane Steam yeMac